Lioka 15 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
15 Ary nanatona mba hihaino azy ny mpamory hetra+ sy ny mpanota+ rehetra. 2 Koa nimenomenona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna hoe: “Ilehio mandray tsara ny mpanota sady miara-mihinana aminy.”+ 3 Dia nilaza izao fanoharana izao taminy i Jesosy: 4 “Iza aminareo moa, raha manana ondry zato ka very ny anankiray, no tsy hamela ny sivy amby sivifolo any an-tany efitra, ka handeha hitady ilay very mandra-pahitany azy?+ 5 Ary hataony eo an-tsorony ilay izy rehefa hitany, sady hiravoravo izy.+ 6 Dia hovoriny ny namany sy ny mpiara-monina aminy rehefa tonga any an-tranony izy, ka hilazany hoe: ‘Miaraha mifaly amiko, fa efa hitako ilay ondriko very.’+ 7 Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana mihoatra noho izany any an-danitra ny amin’ny mpanota anankiray mibebaka+ noho ny amin’ny olo-marina sivy amby sivifolo izay tsy mila mibebaka.+ 8 “Ary iza moa no vehivavy manam-bola madinika drakma* folo, ka very ny anankiray, no tsy handrehitra jiro sy hamafa trano ka hitady azy tsara mandra-pahitany azy? 9 Dia hovoriny ny vehivavy namany sy ny mpiara-monina aminy rehefa hitany ilay izy, ka hilazany hoe: ‘Miaraha mifaly amiko, fa efa hitako ilay vola very.’ 10 Lazaiko aminareo fa mifaly toy izany koa ny anjelin’Andriamanitra rehefa misy mpanota anankiray mibebaka.”+ 11 Ary hoy izy, avy eo: “Nisy lehilahy nanan-janaka roa lahy.+ 12 Dia hoy ilay zandriny tamin-drainy: ‘Omeo ahy, ry Dada, ny anjara fananana tokony ho ahy.’+ Koa nozarain-drainy tamin’izy roa lahy ny fananany.+ 13 Rehefa afaka andro vitsivitsy, dia nangonin’ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandanilany foana ny fananany tamin’ny filibana izy.+ 14 Koa rehefa laniny ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy nanerana ilay tany ka nihanahantra izy. 15 Lasa mihitsy aza izy nankany amin’ny tompon-tany anankiray tao amin’izany tany izany, ka nisisika hiasa tao aminy. Koa nirahin’io hiandry kisoa+ tany an-tsaha izy. 16 Satriny ho vokin’ny hanin-kisoa, nefa tsy nisy nanome hanina azy.+ 17 “Dia tonga saina izy, ka nanao hoe: ‘Firifiry akory moa ny olona karamain-draiko no manan-kanina be dia be! Izaho anefa ity ho faty mosary eto. 18 Hiainga aho ka handeha+ ho any amin-draiko, dia hilazako izy hoe: “Dada ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy taminao aho.+ 19 Tsy mendrika ny hantsoina hoe zanakao intsony aho. Ataovy toy ny iray amin’ireo olona karamainao aho.”’ 20 Dia niainga izy ka nankany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazan-drainy ary nangoraka azy rainy, ka nihazakazaka ary niantoraka teo amin’ny vozony sady nanoroka azy tamim-pitiavana. 21 Ary hoy ilay zanany taminy: ‘Dada ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy taminao aho.+ Tsy mendrika ny hantsoina hoe zanakao intsony aho. Ataovy toy ny iray amin’ireo olona karamainao aho.’+ 22 Fa hoy ny rainy tamin’ny mpanompony: ‘Mandehana haingana! Mitondrà akanjo lava, ilay tsara indrindra, ka ampiakanjoy+ azy, ary asio peratra+ ny tanany sady asio kapa ny tongony. 23 Dia alaivo ilay zanak’omby mifahy+ ka vonoy. Ary aoka isika hihinana sy hifaly, 24 satria efa maty ity zanako ity fa velona+ indray, ary efa very fa hita indray.’ Dia nanomboka nifaly izy ireo. 25 “Ary tany an-tsaha ilay zokiny+ tamin’izay. Koa rehefa nody izy, dia nandre mozika sy olona nandihy raha iny izy nanatona ny trano iny. 26 Dia niantso mpanompo anankiray izy, ka nanontany azy izay anton’izany. 27 Koa hoy ilay mpanompo: ‘Tonga ny rahalahinao+ ka namono zanak’omby mifahy rainao,+ satria tafaverina eo aminy indray izy sady salama tsara.’ 28 Tezitra anefa ilay zokiny, ka tsy nety niditra. Dia nivoaka rainy ka niangavy azy,+ 29 nefa hoy izy tamin-drainy: ‘Taona maro izao no nanompoako anao, ary mbola tsy nandika ny didinao mihitsy aho na indray mandeha aza, kanefa mbola tsy nanome ahy osy iray akory ianao na indray mandeha aza, mba hifaliako miaraka amin’ny namako.+ 30 Fa raha vao tonga kosa io zanakao+ io, izay nandany ny fanananao tany amin’ny mpivaro-tena,+ dia namonoanao ilay zanak’omby mifahy.’+ 31 Dia hoy rainy: ‘Ianao ange, anaka, teto amiko foana e! Ary anao daholo izay rehetra ananako!+ 32 Koa tsy maintsy mifaly sy miravoravo isika, satria io rahalahinao io dia efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray.’”+